ဆရာတော် တစ်ပါးရှင်းပြထားတဲ့ သေသူတွေကို သရဏဂုံတင်လို့ ရနိုင်/မရနိုင်? – Shwe Yaung Media
2021 | 01/12/2021 | Knowledge | No Comments
ဆရာတော် တစ်ပါးရှင်းပြထားတဲ့ သေသူတွေကို သရဏဂုံတင်လို့ ရနိုင်/မရနိုင်?သေသူကို သရဏဂုံတင်လို့ ရနိုင်သလား..?မရပါဘူး…သေသူကို သရဏဂုံတင်လို့ ဘာမှ အကျိုးမရှိတော့ပါဘူး…ဒါဆိုရင် ဘာလို့ သုဿာန်တွေမှာ သရဏဂုံတင်ကြတာလဲ..?သုဿာန်တွေမှာ သရဏဂုံတင်ကြတာဟာသေသူအတွက် မဟုတ်ပါဘူးကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဟာသေသွားသူအတွက် ဝမ်းနည်း ပူဆွေ ဗျာပါဒတွေဖြစ်ကြတော့သရဏဂုံပန်းဟာ ညိုးနွမ်းနေကြတယ်ဒါကို ပြန်ပြီး လန်းဆန်းစေဖို့အတွက်နောက်တစ်ချက်က ဆွေမျိုးတစ်ဦးဦး ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားလို့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခကြီးစွာ
ခံစားနေရတဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုဝင်တွေ ဆွေမျိုးတွေကို ဒုက္ခနည်းပါးစေဖို့ သောကနည်းပါးစေဖို့အတွက်ဘုရားကို သတိရကြပါ တရားကို သတိရကြပါသံဃာကို သတိရကြပါလို့ ကျန်ရစ်သူများ သောကနည်းပါးစေဖို့ လျော့ပါးစေဖို့ သတိပေးတဲ့သဘောနဲ့သရဏဂုံတင်တာပါပဲ…သရဏဂုံ တည်ရခြင်းရဲ့ အကျိုးတရားဟာလည်းအလွန်များပါတယ် သာဓကတွေ အများကြီးပါ သေသူ အလောင်းကောင်ကြီးကတော့ သရဏဂုံ တင်လို့လည်း မရပါဘူးသူလည်း ဘာမှ မသိတော့ဘူး ပြိတ္တာအဖြစ်နဲ့ အနီးအပါး ကျင်လည်နေရင်တော့သုဿာန်မှာ သရဏဂုံတင်ပြီးအမျှဝေတာကို သာဓုခေါ်ပြီး သုဂတိကို ရောက်နိုင်ပါတယ်
နောက်ပြီးတော့ သုဿာန်မှာမကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ သတ္တဝါတွေလည်းကုသိုလ်၏ အဖိုးဘာဂကို သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကာကောင်းရာဘုံဘဝကို သူတို့လည်း ရောက်သွားစေနိုင်တာမို့သုဿာန်မှာ သရဏဂုံတင်ကြတာဟာ ကောင်းသော ဓလေ့ ကောင်းသော အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်..သရဏဂုံတင်ခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့သေသူထက် ကျန်ရစ်သူတွေ သောကနည်းပါးစေဖို့နဲ့သေသူအကြောင်းပြုပြီးသရဏဂုံကုသိုလ်သီလကုသိုလ် ဒါနစသောကုသိုလ်တွေကို ရရှိစေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်…..သရဏဂုံတင်ခြင်းဟာအကျိုးမဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး အကျိုးရှိသော အလုပ်ပါ ဒါဆိုရင် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ မိသားစုလည်းမပါ လူတွေလည်းမပါပဲအလောင်းကောင်းကြီးနဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတည်းအလောင်းကြီးကို ရှေ့ကချပြီး သရဏဂုံတင်နေကြတာအဓိပ္ပါယ်ရှိပါသလား…?
ဒါကတော့ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူးဘုန်းကြီး တိုင်ပေးတဲ့ သရဏဂုံကိုအလောင်းကောင်းကြီးက လိုက်ဆိုနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး…ဒါပေမယ့်အဲ့လို လုပ်နေကြတာကတော့မြင်ရတာ တော်တော် ရယ်စရာပါအမှန်ဆိုရင် ဘုန်းကြီးက ဘုရားရှိခိုး ပရိတ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်ပြီးကုသိုလ်ကို အမျှပေးတာကမှ သေသူဟာအနီးအနားမှာ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ ပြိတ္တာ အမျိုးအစားဖြစ်နေရင် သာဓုခေါ်ပြီး သုဂတိဘုံရောက်နိုင်ပါဦးမယ်အဲဒါမျိုး မဟုတ်ပဲ သရဏဂုံသွားတင်နေရင်တော့အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး…တော်ကြာ အလောင်းကြီးထလာပီးသရဏဂုံကို လိုက်ဆိုနေရင် အခက်ပါပဲ.ဒါနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကိုယ်တွေ့တစ်ခုကြုံဖူးပါတယ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က အဲဒီတုန်းက ဦးဇင်းတုန်းက ဦးဇင်းဟာ ကိုယ်ရင်ဘဝပဲရှိပါသေးတယ်
ဧရာဝတီ ဖျာပုံမြို့နယ်က ကရင်ရွာလေးတစ်ရွာကို(အိမ်ခြေကတော့ ၆၀ လောက်ရှိပါတယ်) မိုးရာသီအစလောက်မှာ အလည်ရောက်သွားတယ်ဦးဇင်းရောက်သွားချိန်ကကျောင်းက ဘုန်းကြီးကရန်ကုန်ကို ဘုရားဖူးကြွသွားတယ်ဦးဇင်းရောက်လို့ ၂ ရက်ပဲကြာတယ်အသက် ၇၀ ဝန်းကျင် ဒကာကြီးတစ်ယောက် ဆုံးသွားတယ်ဒါနဲ့ ကျောင်းကိုလာပီး သုဿာန်ကို သရဏဂုံတင်ပေးဖို့လာလျှောက်တော့ ဦးဇင်းလည်း ဘုမသိ ဘမသိလိုက်သွားတယ်သုဿာန်ရောက်တော့မိသားစုအပါအဝင် လူဦးရေ၂၀ လောက်ရှိမယ်….ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဆရာကန်တော့ သီလပေး သရဏဂုံတင်အမျှဝေ ရေစက်ချပေါ့ အားလုံးက အဆင်ပြေပါတယ်
အဆင်မပြေတာ တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းရောက်တာနဲ့ ဦးဇင်းရှေ့က ခေါင်းကြီးကိုဖွင့်လူကြီးတစ်ယောက်က အလောင်းပါးစပ်ကိုဖွင့်ပြီး ပုဝါစတစ်ခုကို ထိုးထည့် ကျန်တဲ့ တစ်စကိုကျတော့ဦးဇင်းကို ကိုင်ခိုင်းပြီး သီလပေး သရဏဂုံတင်အမျှဝေရတယ်.. ဘာလို့လဲမေးကြည့်တော့ဘုန်းကြီးသရဏဂုံတင်ပေးတာကိုလူသေအလောင်းက တိုက်ရိုက်လိုက်ဆိုနိုင်အောင်..တဲ့အဝေးကကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဘုန်းကြီးနှင့် အလောင်းကောင် ပုဝါတစ်ကမ်းလက်တစ်ကမ်းနဲ့ မြိုင်စခန်း အငြိမ်းကနေရသလိုပါပဲတော် တော်လည်း ရယ်စရာကောင်းပါတယ်…ဒါဆိုရင် ကိုဗစ်ကာလမှာ သေသွားသူတွေသရဏဂုံတင်ခွင့်မရတော့ ကောင်းရာသုဂတိရောက်နိုင်ပါမလား…?
ဒါကတော့ စောစောက ဖြေပြီးပြီလေသရဏဂုံတင်တာဟာ သေသူကို မဟုတ်ပါဘူးလို့ကောင်းရာသုဂတိ ရောက်နိုင်လား မရောက်နိုင်လားဆိုတော့သူမသေခင် ကောင်းရာဘုံဘဝ ရောက်စေနိူင်သောကောင်းမှု ကုသိုလ်ကံတွေ..သို့မဟုတ် သေခါနီးမှာဖြစ်တဲ့ အာသန္နကံက ကောင်း သောကံ ဖြစ်ခဲ့သလားမဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်မသေခင် နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကျ အာစိဏ္ဏကံကကောင်းသောကံဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သေခါနီးဖြစ်သောအာသန္နကံကလည်း ကောင်းတဲ့ကံဖြစ်နေမှာပါအာစိဏ္ဏကံက မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့အာသန္နကံကလည်း မကောင်းနိုင်ပါဘူးပိန္နဲပင်စိုက်ပြီး သရက်သီးသီးစေချင်လို့ မရသလို
အရက်သောက်လာပြီး ပါးစပ်က ပန်းရနံ့လေး ထွက်ပါစေဆိုလို့ မရနိုင်ပါဘူး….ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကျန်ရစ်သူတွေကဘုရားကိုဆွမ်းပဲကပ်ကပ် ပန်းပဲလှူလှူပြုပြုသမျှ ကုသိုလ်၏ အဖိုးဘာဂကိုသေသွားသူရဲ့ နာမည် သေသွားတဲ့ နေ့ရက်တွေကိုပါးစပ်ကနေခေါ်ပြီး…ယနေ့ပြုရ ကုသလ၏အဖိုးဘာဂကိုဘယ်နေ့ ဘယ်ရက် ဘယ်အချိန်ကဘဝတစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားသူ..ဦး….မ…..အားအထူးအားဖြင့် အမျှပေးဝေပါ၏ ထိုမှတစ်ပါး၃၁ ဘုံ၌ ကျင်လည်နေကြကုန်သောသတ္တဝါမှန်သမျှ အနန္တတို့အားလည်း အမျှပေးဝေပါ၏ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကာကောင်းရာဘုံဘဝမှာ စံမြန်းနိုင်ပါစေ..ဆိုပြီးပါးစပ်ကအသံထွက် အမျှပေးဝေရင်လည်းသေသူက အပေါ်က ပြောခဲ့သလို သာဓုခေါ်နိုင်တဲ့ပြိတ္တာဘုံဘဝ တစ်ခုခုကိုရောက်နေရင်သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး ကောင်းရာသုဂတိကိုရောက်နိုင်ပါတယ်လို့…ဖြေပါရစေ…။
တစ်ခါက မူဆယ် သုဿာန်ရောက်ခဲ့စဉ်ကပုံ
ကျီးပေါင်း ရောဂါ လက်တွေ့ပျောက်စေမဲ့ ပေါက်ပန်းဖြူ
💘2022 မှာ Single or FA ဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ရှိလား 😍
အသက် ၁၆ နှစ် မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း မိန်းကလေးများ ဖတ်ဖို့ပါ